Waa maxay cagaarshoowga noociisa B uu ku keeni karo jirka – Barocaafimaad |
Cagaarshoow B waa infekshan khatar ah oo ku dhaca beerka, waxaana sababa fayrus loo yaqaano Hepatitis B. Dadka qaar uu ku dhaco infekshankaan waxaa laga yaabaa inuu ku noqdo mid joogta, oo macnaheedu ay tahay in cagaarshoow B ay la nool yihiin muddo ka badan lix bilood. Cagaarshoow B oo joogta ah wuxuu siyaadiyaa khatarta ah in uu beerku hawl gabo, kansarka beerka iyo beer subaga.
Dadka uu ku dhaco badankood infekshanka cagaarshoow B waxaa suurta gal ah iney si buuxda uga bogsoodaan xitaa hadii calaamadaha iyo astaamaha cagaarshoowgu ay yihiin kuwo daran. Halka caruurta ay u badan yihiin inuu ku noqdo mid joogto ah.
Waxaa jira tallaal loogu talo galay in looga hortago cagaarshoowga B, hasa yeeshee ma jirto wax dawo ah oo lagu dabar goyn karo hadii uu qofku qaado cagaarshowga B. Waxaa jira tillaabooyin la raaco qofku hadii uu ku dhaco cagaarshoow B si uusan usii faafin.
Calaamadaha iyo astaamaha cagaarshoow B waxey noqon karaan kuwa khafiif ah ama daran, waxey inta badan soo ifbaxaan hal ilaa afar bilood kedib marka qofku uu qaado infekshanka. Calaamadaha iyo astaamaha cagaarshoow B waxaa ka mid ah:
Kala goysyo xanuun
Daal iyo dabar darri
Joonis oo ah indhaca iyo maqaarka oo jaale/huruud noqda
Cagaarshoowgaan waxaa sababa fayrus loo yaqaano HBV. Fayrus wuxuu isaga kala gudbaa dadka asagoo raaca dhiiga, shahwada iyo dareeraha jirka.
Siyaabaha caanka ah ee lagu qaado infekshankaan waxaa kamid ah:
Hooyada oo u gudbisa uurkujirka
Cirbad si kama ah u mudda qofka gaar ahaan xirfadlayaasha caafimaadka.
Farqiga u dhexeeya cagaarshoowga B degdega ah iyo kan joogtada ah
Cagaarshoow B wuxuu noqon karaa mid degdeg ah (Waqti gaaban) iyo mid joogta ah
Cagaarshow B degdeg: wuxuu inta badan qaataa waqti ka yar lix bilood. Difaaca jirka ayaa inta badan ka nadiifiya jirkoo idil fayruska noocaan ah. Waxaa suurta gal ah in qofku uu ka bogsoodo xanuunkaan bilo kooban gudahooda marka uu ku dhaco qof qaan gaar ah. Hasa yeeshee waxaa macquul ah inuu noqdo mid raaga hadii uu ku dhaco caruurta.
Cagaarshoow B joogto: wuxuu inta badan qaataa in ka badan lix bilood. Xalaadaan ayaa ka dhigan in difaaca jirka uu ka quustay ka nadiifinta jirka infekshakaan. Sidaa darteed waxa suurta gal ah in qufku uu ebid la noolaado infekshankaan, waxaan laga yaabaa inuu horseedo xanuuno halis ah oo ku dhaca beerka, sida beer subaga iyo kansarka beerka.
Caruurta ayaa u nugul hadii uu ku dhaco marka ay da’dooda ka yar tahay 5 sano in infekshanku uu noqdo mid joogta ah. Sidoo kale cagaarshoowga joogtada ah waxaa laga yaabaa in aan la ogaan tobanaan sano ilaa inta uu qofku uu caafimaad ahaan u darsado ama uu ku dhaco cudurada saameeya beerka.
Halista keeni karta xanuunkaan
Infekshankaan wuxuu ku faafaa dhiiga, shahwada iyo dareerayaasha jirka. Waxaa siyaada halista ah inuu kugu dhaco infekshankaan hadii aad:
Sameysid galmo xaaraan ah ama aad la sameysid qof aadan baarin
La wadaagtid qof cirbad
Aad la nooshahay qof qaba cagaarshoow B
Aad tahay xirfadle caafimaad
U safartid wadamaha uu caan ka yahay sida Afrika, bartamaha, bariga iyo koonfurta aasiya iyo bariga yurub.
Beerka oo yeesho boogo
Beerka oo hawl gaba